औषधि "इन्फेरफुरिल" एंटीबायोटिक वा होइन: विशेषज्ञहरूको जवाफ
चाहे "इन्फेरफिलिल" एन्टिबायोटिक हो, सबै आमाबाबुको पहिलो चिन्ता हो। Dysbacteriosis, एलर्जी, प्रतिरक्षा को दमन - साइड इफेक्ट, जो ड्रग्स को यस वर्ग को लागि प्रसिद्ध छ। आमाहरू र डाडहरू बच्चाहरूलाई एंटीबायोटिक "इन्फेरफुरिल" दिने डराउँछन्, यद्यपि यो आंत संक्रमणको विरुद्ध प्रभावकारी औषधि हो।
एंटीबायोटिक - जीवनको प्रतिद्वंद्वी
यो यो शब्दको यूनानी अनुवाद हो: दबाइ गर्ने औषधि। रोग रोगजनक जीवाणु विरुद्ध जीव को युद्ध हो। एन्टीबायोटिक्स - एक भाडा सेना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मदद गर्न को लागि, जब उनि संक्रमण संग सामना गर्न सक्दैन।
"इन्फेरेरिलिल" भनेको एन्टिबायोटिक हो कि नगर्ने प्रश्न निर्धारण गर्ने, आइमाई जान्छ कि एन्टिबायोटिक्स को सेना कहाँ देखि आउछ, यो कसरि संक्रमण को रोगहरु संग लडाइन्छ, यसले यो शरीर मा छोड्छ। तब यो स्पष्ट हुन्छ कि "इन्फेरफुरिल" ले यो सेनाको डिटेक्समेन्टलाई बुझाउँछ।
त्यस्ता फरक मूल
एंटीबायोटिक्सका आमाबाबु जीवित जीवहरू हुन्: फंगु, जीवाणु, माइक्रोबक्स। अस्तित्वको लागि संघर्षको क्रममा , तिनीहरू महत्त्वपूर्ण ठाउँमा प्रतिद्वन्द्वीहरू नष्ट गर्ने क्षमताहरू विकास गर्छन् जसमा तिनीहरू बस्छन्। मानिसहरूले यस्ता पदार्थहरू सिकेका छन् र लागू औषधहरू सिर्जना गर्न सक्ने छन् जसले बीमारीको कारणले गर्दा दुर्व्यवहार गर्छ। विशेष पोषक तत्वको मिडियामा मिरियाड उपयोगी माइक्रोबक्सहरू गुमाउनबाट औषधि प्राप्त गर्न।
यो प्रश्नको जवाफ हो कि "इन्फेरफिलिल" एंटीबायोटिक हो वा होइन, यसको उत्पत्ति दिन्छ। उहाँसँग कुनै पनि प्राकृतिक आमाबाबु छैन। यो तयारीमा रासायनिक प्रयोगशालामा संश्लेषित गरिएको छ, यो 5-नाइट्रोफुरनबाट उत्पन्न भएको छ, जसको चेनमा दुई सक्रिय तत्वहरू छन्: नाइट्रो समूह O2एन र फ्री कट्टरपंथी, विभिन्न यौगिकहरूको सक्षम।
पहिलो निष्कर्ष: उत्पत्तिबाट, "इन्फेरेरिल" एंटीबायोटिक्समा लागू हुँदैन। यो कुनै पनि डाक्टर र फार्माकोलोजिस्ट द्वारा पुष्टि गरिनेछ भने, यदि तपाईं यस प्रश्नको साथ तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ।
मुख्य कार्य: दमन र हत्या गर्न
चिकित्सकीय प्रभावको तुलना पनि समस्या स्पष्ट गर्न सक्छ। "Enterofuril" - एंटीबायोटिक वा होइन?
एंटीबायोटिक्स को कार्य चयनशील छ, उनीहरु लाई जीवाणु र माइक्रोबक्स मा केवल उनको प्रतिद्वंद्वीहरु लाई मारते हो। केवल तिनीहरूका विरोधीहरूका पर्खालहरू मात्र तिनीहरू घुसाउन, न्युलियस विच्छेद गर्न, प्रजनन रोक्न र सामान्य रूपमा नष्ट गर्न सक्षम छन्। हाम्रो शरीरका कोशिकाहरूको झिल्लीहरू तीव्र हुन्, कवक, भाइरस, लीजरमा लिम्बियाले तिनीहरूलाई चासो गर्दैन।
"Enterofuril" को क्रियाकलाप तंत्र, र नाइट्रोफुरन को समूह को सबै तैयारी, उन मा नाइट्रो समूह ओ2एन को उपस्थिति संग जुडा छ । यो रिकभरीको पूर्णिकरणको लागि हाइड्रोजन परमाणुहरू चाहिन्छ, जुन रोगजनक माइक्रोबक्सको सेल झिल्लीबाट निकालिन्छ। तिनीहरूका कक्षका पर्खालहरू उल्लङ्घन गरिएका छन्, रोगको कारणले गर्दा प्राणिक विकारहरू कम हुन्छ र नष्ट हुन्छ।
नाइट्रो समूहको साथ, नाइट्रोफुरन अणु अधिनियममा राख्ने कणहरू: तिनीहरू न्यूक्लिक एसिडहरू बाँध्छन्, र तिनीहरूसँग स्थिर यौगिकमा प्रवेश गर्छन्, माइक्रोबियल कक्षले पुन: उत्पादन गर्ने क्षमता गुमाउँछ।
आंतनमा बस्ने धेरै रोगहरु, "Enterofuril" बाँध्न सक्छ र सास फेर्न सक्छ। यो Staphylococci, streptococci, सामोनella, शिगेल, क्लेबिसिल्स, कोलेरा लाठीहरु; लिभरियामा लिभर। नाइट्रोफुरिस भाइरस, एक बोटुलिनम wand र कीड़ेबाट फिसलिएको छ।
एंटीबायोटिक र एन्टिसेप्टिक - एउटै कुरा?
एन्टिबायोटिक्स र नाइट्रोफान्ट तयाररणहरू ("इन्फेरफुरिल" बीचमा) रोगजनहरूको प्रजननलाई रोक्न र तिनीहरूलाई मार्नुहोस्। यसको अर्थ छ कि तिनीहरूसँग बैक्टीरोस्टेटिक र जीवाणुरोधी कार्य हो। यस प्रभावको साथमा पदार्थहरू एन्टिसेप्टिक्स भनिन्छ।
जसको लागि शब्द "एंटीबायोटिक" र "एन्टिबायोटिक" पर्याय हो भन्ने मान्न सकिन्छ कि "Enterofuril" एन्टिबायोटिक हो। विशेषज्ञ स्पष्ट छ: यी औषधीहरूको दुई कक्षाहरू विभिन्न तंत्रहरू र कार्यक्षेत्रका कार्यहरू छन्। उनीहरूको शत्रुहरूको विरुद्धमा, एंटीबायोटिक्स इन्टरफेरिल भन्दा बढी प्रभावकारी ढंगले काम गर्दछ, र यो, बारीमा, रोगजनक माइक्रोबक्सहरूको एकदम ठूलो संख्यालाई बेवास्ता गर्छ।
उपचार गर्नुहोस्, तर मोम नगर्नुहोस्
मैले "इन्फोफिलिल" एन्टिबायोटिक हो कि यो प्रश्नमा अन्तिम बिन्दुमा यी औषधीहरूको साइड इफेक्टको स्वभाव राख्दछ।
एंटीबायोटिक्स को भाडा सेना एक दर्दनाक निशान छोड्छ:
रोगजन्य रोग संग यो उपयोगी ब्याक्टेरिया को मारता छ, एक परिणाम को रूप मा, एक रोगी को क्यान्सर।
रक्तमा प्रवेश गर्दै, एन्टीबायोटिक्स जिगर पुग्छ, जसले उनलाई चिनियाँको रुपमा चिन्ता गर्छ र उनीहरूको शोकमा लडाइँबाट सुरु हुन्छ। यस युद्धको उत्पादनले जिगर आफैलाई जोगाउँछ, यसको रिकभरी बीमारी पछि हप्ता र महिना सम्म हुन्छ।
यो प्रतिरक्षा प्रणाली को मुख्य हार्मोन लिने जिभर इन्टरफेर उत्पादन गर्न गाह्रो छ, शरीरको प्रतिरोध कमजोर छ, यसले एन्टिबायोटिक्स को विदेशी सेना को पहल लाई संक्रमणबाट लड्न इन्कार गर्दछ।
यदि प्रतिरक्षा प्रणालीले बाहिरबाट लागू औषधि निकाल्न चाहँदैन भने, औषधिको अस्वीकृति हो, उदाहरणका लागि। एलर्जी।
र अन्तमा, रोगजनक बैक्टीरिया आफैलाई छिटो परिवर्तन गर्दछ र एन्टिबायोटिक्सको कार्यमा असंवेदनशील हुन्छ।
2. "इन्टरफेरिल" एंटीबायोटिक्सको तुलनामा शरीरमा सही विपरीतमा व्यवहार गर्दछ।
रोगहरु को एक धेरै ठूलो संख्या को हिसाब गर्दै, फायदेमंद सूक्ष्मजीवजीहरु को लागि बिल्कुल हानिकारक छ - saprophytes, जो सरोकारवाला हुन्छन् र आंत मा कवक र putrefactive जीवाणुहरु को विकास को रोकथाम।
रक्त "Enterofuril" घुसना, जिगरमा कुनै नकारात्मक प्रभाव र शरीरको अन्य सबै प्रणालीहरूमा छैन। आफ्नो काम गरिसकेपछि, मस्तिष्कबाट मलहरूबाट हटाईएको छ, रोगात्मक फिना लिन्छ।
यो औषधि न केवल प्रतिरक्षा रोक्दैन, यसले संक्रमणको प्रतिरोध पनि बढाउँछ; Pathogenic सूक्ष्मदर्शीहरूबाट विषाक्त पदार्थहरू डिस्टोक्स गर्दछ; एंटीबायोटिक्स विरुद्ध युद्धमा बाँचेका ती जीवाणुहरू कैद गर्छन्। विशेषज्ञहरु, यो जान्दछन्, प्रायः एंटीबायोटिक्स पछि "Enterofuril" नियुक्ति गर्नुहोस्।
कहिलेकाहीँ, तर धेरै नै नराम्रो, यो औषधिको एलर्जी हो।
यो सही रूपमा लागू गर्न महत्त्वपूर्ण छ
जबकि आंत विरूपण को ईटियोलोजी स्पष्ट छैन, डाक्टर एंटीबायोटिक को आवेदन गर्नु भन्दा पहिले "Enterofuril" को वर्णन गर्दछ । प्रयोगको लागि निर्देशन यसको निष्पक्षता छ:
6 बर्ष सम्म बच्चाहरु लाई यस औषधि को निलंबन को रूप मा संकेत दिए गए हो।
नियमित अन्तराल को लागी औषधि लिन को लागी यो महत्वपूर्ण आंतन मा निरंतर एकाग्रता सुनिश्चित गर्न को लागी अत्यन्त महत्वपूर्ण छ र श्वसन रोगजन्य जीवाणुहरु लाई नहीं दि्छ।
साथसाथै अन्य एजेन्टहरूसँग, इन्फोफुरिल सिफारिस गरिएको छैन।
उपचार एक हप्ता भन्दा बढी समय सम्म रहन्छ।
अब हामी देख्छौं कि Enterofuril को साइड इफेक्ट कम से कम छ। गर्भवती महिलाहरु, आमा र साना बच्चाहरु लाई नर्सिङ को लागी यो रोगहरु को त्यस्ता प्रकारहरु समेत यो लिन सकिन्छ।
"Stomatofit": analogues, आफ्नो तुलना र समीक्षा
उत्पादन "एल-carnitine": प्रयोग, analogs, समीक्षा लागि निर्देशन
तयारी "Semax।" निर्देशन
"Lorageksal": के मद्दत गर्छ, समीक्षा, analogs, प्रयोगको लागि निर्देशन
Antiviral लागूऔषध प्रयोग को लागि 'Grippferon' समीक्षा र सिफारिसहरू
शुरुआती लागि उपस्थिति र पेरोल कदम
GamePad Logitech F310: कसरी पीसीमा कन्फिगर गर्ने?
एक निजी घरमा बिजुली रड: वैकल्पिक को निर्माण!
औषधि "Lugol": प्रयोगको लागि निर्देशन
प्रारम्भिक गर्भावस्था मा जारी कस्तो हुनुपर्छ?
सजावटी माउस: नस्ल, हेरविचार र मर्मतका
लसीका नोड बायोप्सी कस्तो छ?
जूता Reima: कैरेक्टराइजेशन मोडेल, आयोमी ग्रिड, समीक्षा